» जानौं, मानौं : गर्मी मौसममा के खाने, के नखाने ?
जानौं, मानौं : गर्मी मौसममा के खाने, के नखाने ?
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २२:२७
गर्मी समयमा के कस्ता खाने कुरा खाँदा राम्रो हुन्छ र के कस्ता खानेकुरा नखाँदा नै वेश हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारणलाई चासो लाग्ने गर्दछ । मौसम अनुसार पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्दछ। जाडोयाममा भन्दा यो समयमा तुलनात्मक रूपमा स्थास्थ्य समस्या बढी हुने गर्छ ।
– गर्मीमा धेरै पसिना निस्कने हुँदा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यसैले, हामीले प्रसस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्दछ ।
-चियाकफीलाई गर्मीको समयमा कम गर्नु पर्दछ । यसले शरीरमा सुगरको लेबल बढाइदिने भएकाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउँनसक्छन्।
– गर्मी महिनामा पेयपदार्थको चिसोबाट सुरक्षित रहनु अर्को राम्रो उपाय हो । यस्ता पेय पदार्थले नली खुम्च्याइदिने हुनाले यसबाट शरीरमा निकै असहजता उत्पन्न हुन्छ । गर्मीमा चिसो पेयपदार्थ भन्दा पनि फलफूल तथा जुसको सेवन बढाउँदा शरीरलाई सन्तुलित र स्वस्थ राख्न सघाउ पुग्दछ ।
-सजिलो र छिट्टो हुने भएपनि गर्मी महिनामा ड्राई फ्रुट्सलाई ध्यान दिनु हुदैन । यस्ता खाद्यपदार्थले शरीरको तापक्रम बढाउने हुनाले गर्मीमा खानु राम्रो होइन । ड्राई फ्रुट्सको सट्टा ताजा फलफूल खाँदा राम्रो हुन्छ ।
-विभिन्न प्रकारका गर्मी गराउँने खाने कुराहरुबाट पनि गर्मी महिनामा टाढा रहेको राम्रो हो । पालुङ्गो, मुला, लसुन तथा प्याजजस्ता गर्मी गराउने पदार्थ खानु हुँदैन ।
-गर्मी पैदा गराउँने खानेकुराहरु कम प्रयोग गर्नमा ध्यान दिने । जस्तै चिनी, महलगायत ।
-मौसम अनुसार खानेकुरामा ध्यान दिन सकिएमा हाम्रो स्वास्थ्य पक्कै पनि राम्रो हुनेछ ।
यस्ता ६ गल्तीले बढाउँछ मधुमेहको समस्या